विपिको कामलाई मान्यता प्रदान गराएकोले काँग्रेस नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा: शेर्पा — OnlineDabali
Posted on March 5, 2016 by अनलाइन डबली
आङ गेलु शेर्पा
शेर्पा नेपाली कंग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार हुन् । राजनीतिलाई सोच्ने चिन्तनको सवालमा ‘अरुभन्दा म छुट्टै छु’ भन्ने शेर्पा देउवा पक्षीय नेताका रुपमा चिनिन्छन् । नेपाली कांग्रेस सोलु जिल्लाको पटक–पटक सभापति बनेका शेर्पा आफ्नो जिल्लामा लोकप्रिय नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
२०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका शेर्पाले पार्टीले दिएका विभिन्न जिम्मेवारीहरु पनि पूरा गरिसकेका छन् । यो पाली जनजातीको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उठेका शेर्पा आफु केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुनेमा विश्वस्त छन् । उनले विश्वस्त हुने आधारहरु के हुन् त ? उनले जित्दा अरुभन्दा फरक के गर्न सक्छन् ?
प्रस्तुत छ, अनलाइन डबलीको लागि पत्रकार नवराज कुँवरले उनै शेर्पासँग गरेको कुराकानीः
तपाई केन्द्रीय सदस्यमा उठ्नुभएको छ, जित्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ, के छन् आधारहरु ?
हेर्नुस्, म २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यको रुपमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको मान्छे हुँ । यस क्रममा मैले पार्टीका लागि धेरै खटेको छु । जेलनेल भोगेको छु । नेविसंघकै आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक म पक्राउ परेर जेल जीवन भोगेको छु । त्यतिमात्र नभएर वैचारीक रुपमा पनि म पार्टीको सुदृढिकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा लेखहरु प्रकाशन गरेर नयाँ विचार र धारणा राख्दै आएको छु । जसले गर्दा मेरो राजनीतिक संघर्षलाई धेरै साथीहरुले बुझ्नुभएको छ ।
धेरै जिल्लाका सभापतिहरुसंग मैले यसअघि कुराकानी गरेको थिएँ । उहाँहरुले पनि मलाई अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । र अन्य धेरै साथीहरु पनि मेरो विचार र मैले पार्टीमा गरेको परिश्रमलाइ साथ दिने पक्षमा मैले देखेको छु ।
पार्टीमा धेरै संघर्ष गरेको छु भन्नुभयो, तपार्इँको राजनीतिक पृष्ठभुमि के हो ?
मैले अघि नै पनि भने, म नेविसंघको सदस्यका रुपमा २०३६ सालबाट क्रियाशिल काँग्रेसी राजनीतिमा छिरेको मान्छे हुँ । त्यसयता मैले काँग्रेसी राजनीतिमा थकाई मारेको छैन । म २०४१ सालमा त्रिचन्द्र स्व.वि.यू सह–सचिव भएँ । २०४६ मा पार्टी जिल्ला समिति सदस्य भएको थिएँ । २०४७ मा नेपाल शिक्षक संघ सोलुखुम्बुको संस्थापक सचिव, २०४८ मा पार्टी जिल्ला कार्यसमिति सोलुको सचिव, २०५३ मा महासमिति सदस्य, २०५७ मा पार्टी सोलु जिल्ला सभापति, २०५९ सालमा मैले पार्टीको तर्फबाट सांसद टिकट पाएको थिएँ तर त्यतिबेला चुनाव भएन । २०६२ र ६७ मा म दोश्रो र तेस्रो पटक जिल्ला सभापति भएँ । २०६५ सालमा पार्टी केन्द्रीय मस्यौदा समितिको सदस्य २०७० मा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार थिएँ पार्टीको तर्फबाट ।
तपाई कुन पक्ष ?
वैचारिक रुपमा र पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको रुपमा देखिनुभएका शेरबहादुर देउवाजीको निकट छु ।
देउवा र संस्थापनमा फरक के छ ?
देउवाजी कुराभन्दा पहिला काम गर्नुहुन्छ । म पनि राजनीतिमा आईसकेपछि यही चाहान्छु । राजनीतिमा कुराभन्दा ज्यादा काम गर्ने नेतृत्वको आसामा जनताका आँखा छन् । त्यसैले मैले देउवाको नेतृत्वमा समर्थन जनाउँदै सहभागी भएको हुँ ।
के काम गर्नुभो देउवाले ?
यसअघि पनि संस्थापन पक्षका नेताहरुले काम गर्नुभयो । तर पनि ती कामहरु जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेनन् । विपी कोइरालाले पहिलोपटक व्यवहारिक समावेशी क्याविनेट गठन गर्नुभयो । विपिको त्यो कामलाई कानूनतः मान्यता प्रदान गराउनुभयो शेरबहादुर देउवाले । त्यसैले देउवा नेतृत्वनै काँग्रेसमा आजको आवश्यकता हो ।
तपाईका आफ्नो प्रतिवद्दताहरु के छन्, के भनेर भोट मागिरहनुभएको छ ?
निश्चय पनि म केही महत्वपूर्ण एजेण्डाहरुका साथ आएको छु । हुन त पराजित हुँदा पनि पार्टीप्रति मेरो भूमिकामा एकरत्ति कमि त आउँदैन तर मैले जितेको खण्डमा पार्टीलाई विधानसम्मत संस्थागत निर्णय प्रक्रियाद्धारा पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा अगाडि बढाउन र युवाहरुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आफ्नो ठाउँबाट विशेष पहल गर्ने छु ।
अझ पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी दलको रुपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने मेरो भूमिकामा कहिले कमि आउने छैन । मलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको प्रचुर मात्रामा विकास गर्न विशेष कार्यक्रमसहित यस क्षेत्रमा पार्टीलाई सक्रिय संलग्नता गराउन भूमिका खेल्नेछु । छिमेकी मुलुकहरुको तीव्र विकासको गतिसंगै देशलाई समाहित गर्दै आर्थिक कुटनीतिमार्फत मुलुकको समृद्धिलाई टेवा पु¥याउन पार्टीलाई अग्रसर बनाउन विशेष पहल गर्नेछु ।
कांग्रेसलाई सम्पूर्ण रुपमा देशको एक नम्बर पार्टी र जनताको पार्टीको रुपमा विकास गर्न मेरो भूमिकामा म कहिले कमि आउन दिने छैन ।